छठलगत्तै सबै विषयका परीक्षा गर्ने त्रिविको तयारी - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले कोभिड–१९ का कारणले रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कोरोनाविरुद्ध सतर्कताः ५ चैतभित्र कक्षा ९ सम्मको परीक्षा सक्न सरकारको आग्रह
रजिष्ट्रार प्रा. डा. दाहालले माघसम्म सबै परीक्षा सकेर आगामी फागुन/चैतदेखि पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । कोभिड–१९ का कारणले त्रिविका चैतदेखि सञ्चालन हुने सबै परीक्षा स्थगित भएका छन् । अत्यन्तै न्यून भएका परीक्षा भने त्रिविले अहिले पनि भौतिक दूरी कायम राखेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।रासस
ट्याग्स: त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा